Wasaarada Cadaalada Puntland oo iclaamisay in maalinta Isniinta ay Ramadaan kow tahay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeHomeWasaarada Cadaalada Puntland oo iclaamisay in maalinta Isniinta ay Ramadaan kow tahay
June 5, 2016 Abdi Omar Bile Home, Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasaarada cadaalada Puntland ayaa sheegtay in berito ay tahay Ramadaan, sida uu sheegay wasiirka cadaalada.
Wasiirka cadaalada dowlada Puntland Saalax Xabiib oo caawa la hadlay taleefishinka dowlada Puntland ayaa sheegay in bisha laga arkay gobolka Shabeelaha Dhexe ee koonfurta Soomaaliya.
Dhanka kale, Wasaarada diinta iyo awqaafta dowlada federaalka ee Soomaaliya ayaa Iyana iclaamisay in beri oo Isniin ah ay soon tahay.
Dowladaha ugu waa weyn Islaamka ee Caalamka sida Sucuudiga iyo Indunuusiya ayaa Iyana iclaamiyay in maalinta Isniinta ah ay tahay maalinta kowaad ee bisha barakaysan ee Ramadaan Kariim.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Sabti ah kormeer ku sameeyay qaybo kamid ah wasaaradaha Puntland iyo haayadaha dowliga ah. Wasaaradaha iyo haayadaha dowliga ee uu kormeeray madaxweynaha ayaa waxaa [...]